Natambatra: Sehatra fiasa sosialy | Martech Zone
tafaray manome ny haitao varotra rahona sy ny rindranasa ahafahan'ny fikambanananao mitantana ny fiainam-pivarotana sosialy manontolo, manome ROI mazava sy isa. Ny sehatra Unified dia manome rafitra firaketana mirakitra marika, masoivoho ary mpivarotra.
soa azo avy amin'ny Sehatra fiasa ara-tsosialy an'ny Unified
Manana sy mifehy ny angona marketing - Ny Social Operating Platform dia mampifandray ireo masoivoho, mpivarotra ary marika rehetra iarahanao miasa ao anatin'ny rafitra marketing rahona tokana, manome anao fomba fijery feno momba ny fikambanana marketing rehetra anao. Omeo hery ny orinasanao hihetsika haingana ary hanao fanovana - azonao atao ny manova masoivoho, mpivarotra na ekipa anatiny nefa tsy hahafoana ny angona tantara.
Manaova fanentanana ara-tsosialy sarotra - Mankanisa ny mpanjifa amin'ny fotoana mety, miaraka amin'ny hafatra mety, amin'ny tambajotra sosialy marobe avy amin'ny sehatra tokana. Ny Social Operating Platform dia ahafahan'ny mpitantana ny vondrom-piarahamonina, ny mpandahatra ny haino aman-jery ary ny masoivoho mpamorona hiasa amin'ny tanjona iray ihany - mampihetsika ny mpihaino anao.
Hamafiso ny haino aman-jery voaloa, manana ary mahazo - Ataovy lasa lavitra kokoa ny dolara rehetra laninao amin'ny media - jereo mihoatra ny tsindry sy ny fahatsapana ary manomboka manatsara ny fiantraikany lehibe indrindra amin'ny fahatakarana ny fomba namoronana ny haino aman-jery karamao manome lanja fanampiny azo raisina rehefa mifandray amin'ny atiny ny olona. Ny sehatra fiasa ara-tsosialy no vahaolana tokana mampivondrona haino aman-jery voaloa, manana ary mahazo.
Adikao data ROI ny angona lehibe - Tsory ny tatitra nataonao amin'ny alàlan'ny fanolorana hetsika ara-tsosialy (tiany, hevitra, fizarana, bitsika, sns.) Ny sandany dolara ho anao, ahafahanao mampitaha sy manatsara ny fampanjariam-bola farany azo. Avelao ny olona rehetra ao amin'ny ekipanao handrefy ny zava-bitan'ny ROI, fa tsy hifantoka amin'ny metatra malefaka na manjavozavo toa ny firosoana na ny ahatongavana.
Mandraisa fanapahan-kevitra aroson'ny data - Ny sehatra fiasa ara-tsosialy dia manara-penitra sy manisa ny angon-drakitra momba ny varotrao hanomezana valiny amin'ny fanontaniana toy ny sehatra iza no niteraka ROI lehibe indrindra tamin'ity fampielezan-kevitra ity? Iza amin'ireo mpivarotra na PMD no nahomby indrindra nandritra ny fotoana iray? Ahoana no ahafahantsika mandany vola amin'ny doka ara-tsosialy amin'ny fomba mahomby kokoa?
Ny fiainana ara-tsosialy mitambatra
Tags: haino aman-jery nahazohaino aman-jery tomponyhaino aman-jery karamafampielezan-kevitra ara-tsosialyrafitra fiasa sosialymirayfiraisana ara-tsosialy